စိတ်ကူးပျော်ရာ: သွေးကင်ဆာ (ခေါ် ) Leukaemia အကြောင်း သိကောင်းစရာ
သွေးကင်ဆာ (ခေါ် ) Leukaemia အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အား လ၀န်း ရေးသားပါသည် မတ် 13, 2012 at 10:16pm
စာပို့ မယ် View Blog
Leukaemia ( လူကီးမီးယား) ကို သွေးကင်ဆာအဖြစ် လူသိများကြပါတယ် ။ လူကီးမီးယားဆိုတာ ရိုးတွင်းချဉ် ဆီတွေ ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Haematopoietic stem cell ဌာနမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ တစ်မျိုး (Malignant disorder ) ဖြစ်ပါတယ် ။ လူကီးမီးယား ဖြစ်ပြီဆိုရင် Bone Marrow လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲမှာ (သို့မဟုတ်) Peripheral Blood ထဲမှာ သွေးဖြူဥဆဲလ် အရေအတွက်တွေမြင့်တက်လာပါတယ် ။ လူကီးမီးယား ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ် စဉ်ဟာ သူ့ရဲ့အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ရက်အနည်းငယ် (သို့) ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (သို့) နှစ်ပေါင်း များစွာ ထိအောင်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ် ။ သွေးကင်ဆာပုံစံအမျိုးမျိုးရဲ့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ နှစ်စဉ် လူတစ်သိန်းမှာ ၁၀ ယောက်လောက်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အဲဒီထဲက တစ်ဝက်ခန့်က လူကီးမီးယားပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မိန်းမတွေ ထက် ယောင်္ကျားတွေက ပိုအဖြစ်များနိုင်ပြီး အချိုးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Acute leukaemia မှာ ၃း၂ ရှိပြီး နာတာရှည် Chronic Lymphocytic Leukaemia မှာ ၂း၁ ရှိပါတယ် ။ ပထ၀ီမြေပြင်အနေအထားအရတော့ တရုတ် ၊ တရုတ်နှင့် ဆက်နွယ်သော မျိုးနွယ်များမှာ Chronic lymphocytic leukaemia အဖြစ်များပါတယ် ။ Acute Leukaemia ကိုတော့ အသက် အသက်အရွယ်မျိုးစုံမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ Acute Lymphocytic Leukaemia ဟာ အသက် တစ်နှစ်ကနေ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ Acute Myeloid Leukaemia ပုံစံ မျိုးစုံ ကတော့ ငယ်ရွယ်ချိန်အဖြစ်နည်းပြီး အလယ်အလတ်ပိုင်းနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။
သွေးကင်ဆာရှိတဲ့ အမွှာ တွေကနေ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားလေ့ရှိတယ် ။ Down’s Syndrome နဲ့အ ခြားသော မျိုးဗီဇ ရောဂါတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားလေ့ရှိပါတယ် ။
လူကီးမီးယား ဆဲလ် အရေအတွက် မြင့်မားလာခြင်းနဲ့ သင့်ရဲ့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီက ပုံမှန် သွေးဆဲလ်တွေကို မထုတ် လုပ်နိုင်ခြင်းကနေ လူကီးမီးယားရဲ့ လက္ခဏာတွေက စတင်ပါတယ် ။ Acute leukaemia တွေဖြစ်တဲ့ (AML , ALL ) မှာဆိုရင် ပုံမှန် သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေနဲသွားပြီး Neutropenia ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ မော ပန်းလွယ်ပြီး ဖြူဖျော့လာမယ် ။ အသက်ရှူရတာလည်း ခက်လဲပင်ပန်းလာမယ် ။ Platelets လို့ခေါ်တဲ့ သွေးခဲစေတဲ့ အရာတွေနဲသွားရင်တော့ Thrombocytopenia လို့ခေါ်တဲ့ သွေးမခဲတဲ့ အခြေအနေ တစ် ခုဖြစ်နိုင်ပြီး သွေးထွက်ခြင်း ၊ သွေးမတိတ်ခြင်း လက္ခဏာတွေ ခံစားရပါမယ် ။ သွေးခြေဥခြင်းနဲ့ သင့်ရဲ့ အရေ ပြားပေါ် မှာ ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် အနီစက်လေးတွေ တွေ့လာပါမယ် ။ ယေဘူယျ လက္ခဏာတွေကတော့...
Chronic leukaemia ရဲ့ အစပိုင်းအဆင့်များမှာတော့ Leukaemic cells တွေဟာ ပုံမှန်အခြေအနေရှိပြီး ဘာ လက္ခဏာမှ ပြလေ့မရှိပါဘူး ။ လက္ခဏာပြပြီဆိုရင်လည်း အနည်းငယ်မျှ သာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဆိုးလာပါတယ် ။ Chronic Leukaemia ရဲ့ ယေဘူယျလက္ခဏာတွေကတော့...
- Lymph nodes များတွင် နာကျင်မှုမရှိပဲ ရောင်ရမ်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အထက်ပါ လက္ခဏာတွေ ရှိတိုင်းလည်း လူကီးမီးယားမဟုတ်ပါဘူး ။ တခြားပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ဖျားနာ တုပ်ကွေး တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ရောဂါအမည် သတ်မှတ်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ သက်တန်ချို ပိုစ်အား Facebook မှ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါသည်...။
သူငယ်ချင်းအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရှင်......:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/13/2012 11:51:00 AM
▼ 2012 (3025)
မင်းသားညီနောင်နဲ့ အတွဲထူးလာတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ ‘ချ...
တရားခံထက်ထက်မိုးဦးအား ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်ထောင် ပြစ်ဒဏ်ချ...
ဂေါ်ရခါး သီးနှင့် ကျန်းမာရေး
(နေပြည်တော်), စစ်သမိုင်းပြတိုက် ရောက်တုံးရောက်ခိုက...
ခမ်းနားသော အပြင်အဆင်များဖြင့် အိမ်တစ်လုံးကဲ့သို့ ခ...
ဗီယက်နမ်မှ ဇနီးတစ်ဦးအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကျပ်ဖြ...
အားမလိုအားမရ အတွေးများနဲ့ ပုဂံ ခရီး
စစ်ကိုင်းမြို့ မြင်ကွင်းများနဲ့ စစ်ကိုင်းအဖွဲ့ချုပ...
လူသေကို အစာအနေဖြင့် လူသားစားငှက်များကို ကျွေး ပြီး...
ရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲမှ အမြင်မတော်သော မြင်ကွင်းများ
စကတ်တိုလျှင် မဖွယ်မရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုအဖြစ် အရေးယူမည...
သားဇောနှင့် ခြင်္သေ့မများနှင့် မိကျောင်းတိုက်ပွဲ
ဂျပန်ရဲ့ နွေဦးကြို ပန်းလေး
Huawei ဖုန်းများအတွင်းသို့ မြန်မာစာ Font နှင့် Key...
ထူးခြားဆန်ပြား ဒေါက်ဖိနပ် ဒီဇိုင်းများ
မြတ်စွာဘုရားရှင် ၀ါဆိုတော်မူရာ မြို့၊ ရွာ ဒေသများ
ကြွေပန်ကန်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီ
အလုပ်များသူတွေအတွက် Desktop ပေါ်မှာ Note လေးတွေ ထား...
၁၂နှစ်နဲ့ ဆံပင်အရှည် ၅ ပေ ၂ လက်မရှိ ဘရာဇီးလ် မိန်း...
သင်္ကြန်သီချင်းဟောင်းများစုစည်းမှု့ (Mp3 ဒေါင်းမယ်
Facebook မှ တွေ့သော အလန်းဇယား ရယ်စရာ ပုံလေးများ
Window တင်နည်း နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်အိမ်လိပ်စာသိ...
ကုလသမဂ္ဂ မှာ ဆု၇ခဲ့တဲ့ ဟာသ ကားပါ ( ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းေ၇...
Right Click ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်ဆောင်ပေါ်ထွင်းထုသော ဆင်းတုတော်...
ချိစ်များများစားခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်စွမ်းရည် မြင့်...
တော်လှန်ရေးနေ.(မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့) ၆၇နှစ်မြောက်တော်လှန...
စိတ်ကလေး သိပ်အဝေးမသွားပါနဲ့ (အရှင်ဆန္ဒာဓိက-ရွှေပါရမီ...
အမွှေးကံချစ်တော့ အချစ်ကံမွှေးတာပေါ့ (အရှင်ဆန္ဒာဓိက - ...
ကိုယ့်အိမ်မှာ ရေဒီယို နားထောင်ကြရအောင်
ဖား နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ
ဗိုလ်ချုပ် နှင့် မမေစုတို့ရဲ့ ပန်းချီပုံရိပ်များ
ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီး ဖိုင်လေးတွေကို ဖျောက်ချင်ရင် စမ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယ အချမ်းသာဆုံးသူဋ္ဌေးကြီး Warren Buffe...
မြတ်စွာဘုရား၏မဟာပုရိသလက္ခဏာ ၃၂ ပါး
Browser အတွင်းမှာပဲ Youtube Video တွေကို Full Scre...
မေတ္တာအကျိုး ၁၁-မျိုးနှင့် မေတ္တာသုတ်ဖြစ်စဉ် ပါဠိတော...
PhotoShop Software ဖြင့် အရောင်ပြောင်း Animationြ...
Facebook ထဲမှ ဟာသပုံလန်းလေးများ(၄)
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စားသားထည့်ပြီး ကွန်ပျူတာကို စကားပြေ...
သက်ဝင်လှုပ်ရှား အီခဲဘာ့နာ့ ပန်းအလှများ
ခြေချောင်းလေးများ ဖြူဖွေးလှပနေစေမည့် အိမ်တွင်းဂရုစ...
ကမ္ဘာ့ ကံအဆိုးဆုံးနဲ့ ကံအကောင်းဆုံးလူသား
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရရှိခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိုက်ဖက်သော - ဂျင်းဘောင်းဘီ Styl...
ငါ့မောင်တို့အတွက် “တို့မြန်မာ ယောက်ျားကောင်းများ” ...
ဘုရားပုံတော် Animation Phone Wallpaper များ
ခဲတံနဲ့ ခက်ရင်းတို့ကို ဒီလိုလေး ပုံဖော်လို.ရတယ်လေ
အိုဘားမား ရဲ့ ငယ်စတိုင်(ဓါတ်ပု့အချို)
ဘုရားရှင်၏ အံ့ဖွယ် ၁၈ ပါး
သိမ်ဒါယကာ ကျွဲပေါက်ကြီးနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန် ကံကြမ္မာ ဆ...
အဘွားအိုတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်သူ လူငယ် ဖမ်းဆီးခံရ
ခုနှစ်ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ပေါင်အထိကျဆင်းနို...
ဆိုခရေးတီးစ်ရဲ့ ရေစစ်ကလေးများ (အတင်းတုတ်တတ်သူများအ...
Facebook ထဲမှ ဟာသပုံလန်းလေးများ(၃)